Ihe omuma | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ihe omuma
Atụmatụ na-elekọta loquat, esi eto eto osisi
Medlar abụghị osisi a na-ewu ewu na ụbụrụ anyị, ma ụfọdụ ndị na-ahụ anya ga-achọ ịmalite. Ụdị ụdị nke abụọ - German na Japanese. Ha na-arị elu na ebe ndị na-ekpo ọkụ dị elu na ndị dị nro, ma n'ihi oke nchedo dị elu, ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-esi na-eto ya n'ala.
Passionflower: nlekọta zuru ezu, ọgwụgwọ ọrịa na ngwa ngwa
Passionflower bụ osisi osisi dị ịtụnanya. Ọ bụ nke ezinụlọ Passion Flowers na nwere ihe karịrị narị isii ụdị. Osisi vaịn a na-eto eto na-eto na ogbe America, Australia, Eshia na Mediterenian. Passionflower abụghị naanị aha nke osisi ahụ, a na-akpọkwa ya mmanu mmanu, onye na-edozi ụlọnga, ụkọ agha, mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi, granadilla, ifuru nke ọchịchọ nke Onyenwe anyị.
Na-eto eto na windill, ụlọ na-apụ apụ
Medlar bụ ihe a na-eme mgbe niile. Na-achọ ịkwagharị. Enwere ihe dị ka ụdị 30 nke loquat, ma n'ụlọ, nrịbama ahụ na-eto ma na-amị mkpụrụ. Ị ma? Medlar malitere ịzụlite na Japan. N'elu nrịgo ụlọ nwere ike ịrị elu site na 1.5-2 mita. Akwụkwọ nke osisi bụ oblong, leathery, kenkowa n'elu, ala - velvety.
Otu esi etolite etiti na ulo
Nye ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, inwe osisi nke ọ bụghị nanị na ọ na-atọ ụtọ n'anya, ma na-amị mkpụrụ, ọ bụ idozi echiche. Otu n'ime osisi ndị a na-amị mkpụrụ, nke nwere nnukwu ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya - kumquat, bụ osisi citrus nke nwere ike itolite n'ụlọ. Ị ma? A sụgharịrị site na Chinese kumquat - bụ "ọlaedo apụl".
Ihe bara uru ma na-emerụ kumquat, anyị na-amụ ihe
Kwa afọ, mkpụrụ osisi ndị ọzọ na-apụta na ụlọ ahịa anyị, ya mere, kumquat (ma ọ bụ odo odo) anọwo ogologo oge ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ. Dịka mkpụrụ citrus nile, mkpụrụ nke kumquat nwere ọtụtụ uru bara uru, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a. Ihe mejupụtara nke kumquat: usoro nke vitamin na mineral. N'aka elu, kumquat dị ka ngwakọta oroma-lemon.
Akwukwo anumanu: ihe di iche iche na nkpuru osisi ndi ozo
Ebe ọ bụ na Christopher Columbus ọkara puku afọ gara aga bụ Europe mbụ na-atọ ụtọ painiapulu, a na-enwetakwa ọtụtụ àgwà ndị na-akọwa ụdị nri a. O wee pụta, karịsịa, na e nwere ụdị 9 a maara nke pineapples na ọtụtụ ụdị na iche iche. Tụlite ha maka ebumnuche ọgwugwu.
Esi esi na osisi na-eto eto
Osisi ndị dịpụrụ adịpụ n'ụlọ anaghịzi abụ ihe ijuanya, ma ha ka na-enwe obi ụtọ na ọdịdị ha na ebe ọkụ na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ. Pọọpọ bụ otu n'ime osisi ndị a, n'ọdịdị ya, ọ dị ka nkwụ nke nwere ogologo akwụkwọ. Na ọdịdị, ịdị elu ya ruru mita 10, n'ụlọ - ruo mita 6 n'ịdị elu.